nmn poda, nr poda, tadalafil poda-inogadzira RFQ
Ndinokutendai kuburikidza nesu! Tichakurukura newe munguva pfupi, dzokera ku musha peji kana kuona zvimwe zvinogadzirwa.
Iwe uri mugadziri kana kambani yebhizimisi?
Ndapota tumira kutora urongwa urongwa nemahofisi email ([email inodzivirirwa]) uye zvinyorwa zvichagoverwa, pamwe chete nenguva yekubhadhara.
Kubhadhara kwakaitwa uye chikamu chekugamuchira & kero yakapihwa
Izvo zvinhu zvichaendeswa nenhamba yekutevera, yepakeji pikicha, yekutevera nhamba uye inofungidzirwa zuva rekuuya.
Nhumbi dzakagamuchirwa uye dzinopa mhinduro.
Nzira yekutanga mairairo uye kubhadhara sei?
Iwe unogona kutitumira sarudzo yako yekutenga kana, kana kutumira chinyorwa chinyorwa ne email kana neMutungamiri weHurumende, zvino tichakutumira iwe Proforma Invoice nemabhuku edu ebhangi nokuda kwekusimbisa kwako kubhadhara sezvikumbiro zvako.
Muenzaniso Unowanika Here?
Hungu, zvimwe zvigadzirwa zvinogona kutumirwa semuenzaniso wakasununguka, asi pane iwe unobhadhara mari yekutumira.
Nzira yekupikidzikisa unhu hwemhizha musati waisa mirairo?
COA, HPLC, HNMR iripo.
Kuongorora mapepa nevechitatu mapepa mabhizimisi achapiwa nguva nenguva.
Nzira yekupikira mari yangu yakachengeteka?
Hurongwa hwose hwedu mbiriso yakasviba inogona kudzorerwa mari isati yatumirwa kunze.
Nokuda kwekubhadhara kwose kuAASraw, vanovimbiswa nekutora, kubhadhara, kuendesa mberi, kana chero chii chatinokwanisa mukati memakore 5.
Zvakadini nenguva yekuendesa?
Mukati 1 ~ 3 mazuva mushure mekubhadharwa kwakasimbiswa. (Zororo reChina harina kubatanidza).
Pane kuraswa here?
Hungu, nokuda kwehuwandu hwehuwandu, tinogara tichitsigira nepamusoro mutengo.
Unogona here kuvimbisa kupapo?
Zvinhu zvedu zvitsva muimba yekuchengetedza zvinhu zvakarongeka uye zvinotungamirirwa nehurongwa, huchaita kuti hurumende ishandiswe munguva.
Hauzive ruzivo rwechigadzirwa here?
Kuti uwane mamwe mashoko nezvechigadzirwa, unogona kuona yedu chigadzirwa mashoko uye blog articles Pachava nemhinduro dzakanaka
Dehydroepiandrosterone/DHEA Poda (53-43-0)
www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com www.anonyij.com chaida.bm www.vapeworld.com www.hashuni.com